Articles, Politics / By MND AA
Myanmar’s civil war has raged on and off for more than halfacentury. A new round of continuous armed conflicts broke out in the past decade is the result of the Myanmar army’s first attack on the first special zone of Shan state and the Myanmar national democratic alliance in 2009 with Kokang as …
Who is to blame for undermining the peace? Read More »
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများသည် ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ကြာ ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ဆယ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းစစ် အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာရသော အကြောင်းအရင်းမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရှမ်းပြည်နယ် အထူးဒေသ (၁) ရှိ MNDAA အဖွဲ့ကို စတင်ကြံစည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုးကန့်ဒေသကို တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ KIA အဖွဲ့ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ တအာင်းဒေသ၊ ရခိုင်ဒေသတို့တွင် တိုက်ပွဲများကို ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများ ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသောနေရာများသည် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတို့ မှီတင်းနေထိုင်ရာ ဒေသများတွင် …
“ညီနောင်မဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့ ဘာကြောင့် ကျောက်တုံးကို ကြက်ဥနဲ့ သွားထုရတာလဲ” Read More »
An analysis of the ethnic armed operations in the deep areas of Myanmar In the face of the hegemonic dictatorship that has ruled Myanmar for more than halfacentury, in the face of the armed forces that oppress the various ethnic groups in the country, and in the face of the self-armed and militaristic …
Who is the culprit to sabotage the peace process? Read More »
မည်သူက မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို နှောင့်ယှက်ဖျက်စီးနေတာလဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ညီနောင်အဖွဲ့မြို့ပေါ်ထိ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်လာရသော အရင်းခံအကြောင်းအရင်းများ လေ့လာချက် ရာစုဝက် (နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်)တိုင်တိုင် အာဏာရှင်ဆန်ဆန် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်လာခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအပေါ်တွင် လက်နက်အားကိုးဖြင့် အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်နေခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် စစ်သည်အင်အားအမြောက်အများဖြင့် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နယ်စပ်ရှိတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများအပေါ်တွင် ရက်စက်စွာဖိနှိပ်မှုများကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရုံ မှအပ အခြားရွေးစရာမရှိတော့ပေ။ ထိုကဲ့သို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှသာလျှင် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်၊ တန်းတူရည်တူခံစားပိုင်ခွင့်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် မြန်မာ့အမျိုသားဦးစားပေး ဝါဒီများ သတိမူလာကြမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအကုန်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အချို့သောဒေသများအတွင်းတစ်ဖက်သတ် စစ်ပွဲများရပ်စဲမည်ဟု ကြေညာကာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီဟူသော ပုံရိပ်အတုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို တိတ်တဆိတ်လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရှိ …
မည်သူက မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို နှောင့်ယှက်ဖျက်စီးနေတာလဲ Read More »